BBC ၏ Tales from the Street : The Man Behind the Camera ကို ခံစားတင်ပြသည်။… – PVTV Myanmar
·9months ago ·40 Comments
BBC ၏ Tales from the Street : The Man Behind the Camera ကို ခံစားတင်ပြသည်။
Like – 16K Share – 2057
Myat Ko Ko says:
2021-04-18 at 9:11 AM
PSI နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပီး TV channel လြင့္ေပးပါလိုစ္ေတာင္းဆိုပါတယ္
Poe Zaw Khant says:
2021-04-18 at 9:12 AM
Suggest to add English subtitle. Thank you.
Thein Myint Khine says:
2021-04-18 at 9:18 AM
အဆုံးထိ မကြည့်လိုက်ဘူး။ ငိုချင်လာလို့။ 🙁
so proud our Spring Revolution. thank you.
Jennie Man Du says:
2021-04-18 at 9:23 AM
So proud of our bravest heroes
Hlwan Htet Kyaw says:
2021-04-18 at 9:24 AM
We must win for the justice of the fallen heroes
We must win for the future of the survivors
We must win surely!
thanks admin and thanks our heroes and our GZ
Sincere Phyo says:
အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ ‌English စာတန်းထိုးပြီး တင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
2021-04-18 at 9:55 AM
Sai Zim Sha says:
2021-04-18 at 10:04 AM
ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ မဟုတ္ပါ.
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ပါ”
Awah Young says:
ဘယ်သူမဆိုထိခိုက်ခံရတိုင်း ကျွန်မတို့ ရင်ထဲမချိအောင်နာရပါသည်…
2021-04-18 at 10:16 AM
အရေးတော်ပုံ ဆက်လက် အောင်ပွဲ ဆင်နိုင်ကြပါစေ
2021-04-18 at 10:25 AM
အောင်စိတ်နဲ့ ပန်းတိုင်ကို ခရီးနေသော မြန်မာပြည်က အာဇာနည် သူရဲကောင်းများ
Helen Khaing says:
တဘဝလုံးအမှတ်ရနေမဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ စစ်အာဏာရှင်လက်ကိုင်တုတ်တွေကို သနားမိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခွင့်မလွှတ်ကြေး
2021-04-18 at 11:14 AM
တင်ဆက်တာ ကြည့်ကောင်းပါတယ် ဝမ်းနည်းရသလို
GB Bloemendaal says:
2021-04-18 at 11:59 AM
For international purposes, could you please consider adding English subtitles?
Kyaw Htet Kyaw says:
2021-04-18 at 12:07 PM
တိုင်းရင်းသားညီအကိုတို့ ငါတို့ စည်းလုံးကြရင် အောင်နိုင်မှာပါ
Thwe Thwe Naing says:
2021-04-18 at 12:40 PM
တကယ့် သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းလေူတွေပါ။ ကျေးဇူးပါ။
Nu War says:
ငါတို့ပြည်သူတွေ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ် ဒီတိုင်ပြည်မှာ ဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါး နောင်ဘယ်တော့မှမရှိအောင် လုပ်ပစ်ရမယ် ငါတို့ပြည်သူတွေ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်
Mî Šü says:
TV channelကနေ PV TVလိုင်းဆိုပြီးကြည့်ရူလို့ရ‌ေအာင်လွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်
Su Charlotte says:
2021-04-18 at 2:55 PM
Can you please add English subtitles for International coverage?
2021-04-18 at 5:14 PM
အဲဒါတွေကြည့်မိတိုင်းရင်ကွဲရတယ်မျက်ရည်ကျမိတယ် လူငယ်လေးတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားမိတယ် ခြွေချခံရတဲ့အသက်တွေကိုနှမျှောရတယ် အောင်မြင်ပါစေ။🙏🙏🙏
IrisNwe Ni Lay says:
2021-04-18 at 5:29 PM
ဘယ်လောက်တောင်ရဲဝင့်စွာရင်ဆိုင်နေကြလဲ ကြည့်ကြပါအုံး အသက်သေမှာကိုတောင်မကြောက် ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာ သိပ်ကိုတော်လွန် တန်ဖိုးကြီးလွန်းကြပါတယ်
萌 えティハ says:
Cho Lae Mon says:
heart touching creation..
Kindly suggest to spread with eng sub for further notice.. 🤍
2021-04-18 at 7:35 PM
Æĥ Ñàinĝ says:
2021-04-18 at 8:07 PM
Tin Wah Wah Tun says:
မှတ်တမ်းများကို ဂုဏ်ယူပါတယ် ဝမ်းနည်းရပါတယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
MoePyae Sone says:
2021-04-19 at 1:10 PM
2021-04-19 at 7:37 PM
Aye Htwe says:
2021-04-22 at 12:11 PM
2021-04-23 at 12:45 PM
Documentary video လေး
တင်တက်မှု အရမ်းကောင်း၊ အားပေးနေပါတယ်